Rugby – «Africa men’s sevens 2019 »: fandresena telo no azon’ny Makis de Madagascar | NewsMada
Rugby – «Africa men’s sevens 2019 »: fandresena telo no azon’ny Makis de Madagascar
Tsara fidirana ny Makis de Madagascar, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja rugby lalaovina olona fito na ny “Africa women’s sevens 2019”. Tsy mbola resy mihitsy ny Malagasy, hatreto.
Fandresena telo, tamin’ireo lalao telo vitany no azon’ny Makis de Madagascar, ho an’ny sokajy “A”, eo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja rugby lalaovina olona fito, sokajy lehilahy. Fihaonana, tanterahina ao amin’ny kianja Bosman Stadium, ao Johannesbourg, Afrika Atsimo.
Omaly zoma, teo amin’ny andro voalohany, tsy nisy naharesy ny Makis de Madagascar, ireo nifanandrina taminy. Raha tsiahivina, teo amin’ny lalao voalohany, lavon’ny Malagasy, tamin’ny isa, 38 no ho 12 ny Botsoaney, avy eo mbola nanilika an’i Zambia, tamin’ny isa, 28 no ho 21 ary nanamontsana an’i Nizeria, tamin’ny isa, 53 no ho 7. Nanan-tombo teo amin’ny hakingana sy ny hafainganam-pandeha ry Rija sy ry Pasy ary ry Danger. Hain’ny Malagasy, ny niala tamin’ny tosika nataon’ireo mpifanandrina taminy, izay lehibe sy matanjaka. Noverezin-dry zalahy, tany amin’ny hazakazaka kosa izy ireo.
Nitarika hatrany ny Makis de Madagascar, tao anatin’ny fe-potoana nilalaovana. Faharoa, manaraka an’i Zimbaboe, ny Malagasy eo amin’ny filaharana ao amin’ity vondrona “A” ity.
Hiady izay ho lohany, ao amin’ity sokajy misy azy ity, izany amin’ity asabotsy ity, ny Makis de Madagascar sy ny Zimbaboeanina. Hanala vela amin’ity ny Makis, satria ny Zimbaboeanina no nandresy azy ireo, teo amin’ny manasa-dalana, nandritra ny “Can 2017”, farany teo.